Sababta Dhabta Ah Ee Uu Barca Uga Maqnaanayo Messi Kulanka Caawa Ee Malaga [Ogow] %
Kabtanka xulka Argentina ee Lionel Messi, ayaa waxaa laga saaray liiska ciyaartoyda Barcelona, kuwaasoo caawa wajahaya kooxda kubada cagta Malaga, kulan ka tirsan horyaalka La Liga, ee wadanka Spain.
Sababaha looga saaray Messi, liiska ciyaartoyda Bluagrana, ayaa waxay tahay inay dhaleyso xaakiisa ama ay Foolaneyso, isagoona arrintaas kusoo war-geliyay maamulka ugu sareeya ee Barcelona, subaxnimadii hore ee saakay.
Xaaska Lionel Messi ayaa waxaa dhawaan la ogaa inay lahayd Uur, iyagoona taahan helaya Cunugoodii saddexaad, maadaama horey ay uwada haysteen Labo curuur, kuwasoo wiil iyo Gabar kala ahaa.
Laakiin, wararka ka imaanaya wadanka Spain, ayaa sheegaya in sababta Messi looga saaray safka Barcelona, ee ciyaarta Malaga ay tahay dhalashada mid kamid ah caruurtiisa oo ku beegan maanta oo Sabti ah.
Warar ayaa tilmaamaya in daafacii ay bishii Janaayo lasoo wareegeen ee Yerry Mina, lagu bedalay booska Messi, isagoona kasoo muuqan kara Kursiga keydka ciyaarta ka dhaceysa Caweysnimada caawa oo Sabti ah.
Sikastaba, waa la arki doonaa midka xaqiiqada ah, iyadoona wax walba ay kala cadaan doonaa saacadaha soo aadan, maadaama kooxda Barcelona, aysan wax war aysan kasoo saarin waqti xaadirkaan arrintaan cusub.
Messi ayaa dhaliyay Afar gool, saddexdii kulan ee ugu dambeysay, ee udheelay hogaamiyaasha La Liga, waxaana hadii ay Barca ku garaacdo Malaga, La Rosaleda Stadium, ay ku qabaneysaa hogaaka horyaalka 11 dhibcodo.
La LigaMalaga vs BarcelonaMessi